आजभोलि झ्याप्प झ्याप्प बिजुली किन जान्छ ? - Aajako Nepali Khabar
Home समचार आजभोलि झ्याप्प झ्याप्प बिजुली किन जान्छ ?
आजभोलि झ्याप्प झ्याप्प बिजुली किन जान्छ ?
समचार admin December 30, 20200Comment
काठमाडाै, पछिल्लो समय बिजुली बत्ति झ्याप्प-झ्याप्प जान थालेसँगै आम मानिसमा लोडसेडिङको त्रास बढ्दै गइरहेको छ ।
जाडो बढेसँगै विद्युत खपत् पनि बढेको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले लोडसेडिङ भएको नभइ हिटरको प्रयोग बढेपछि पुरानो तारहरु पग्लन थालेकाले केही समय विद्युत अवरुद्ध भएको बताएका छन् ।
नयाँ सिस्टमको हिटर पुरानो तारमा जडान हुँदा समस्या आएको बताए, यद्यपि, शाक्य गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा यस वर्ष कम विद्युत काटिएको बताउँछन् ।
लोडसेडिङ भएको छैन र हुँदैन पनि अहिले जाडो बढेसँगै काठमाडौँमा माग बढेको छ र माग बढ्दै जान थालेपछि लोडसेडिङ भएको भन्ने लागेको हो तर विभिन्न फिडरमा मानिसहरुले हिटर थप्न थालेपछि समस्या आउन थालेको उनले बताए
प्राधिकरणका अनुसार कमजोर भएका तारहरु डिसकनेक्ट भएका छन्, पुरानो सिस्टममा भएको तारमा नयाँ सिस्टमका हिटर जडान हुँदा तार पग्लने समस्या देखिएको छ । यो समस्या जहाँ–जहाँ छ सोही ठाउँमा मर्मत भइरहेको छ । ओभरलोड हुँदा समस्या आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गतवर्ष भन्दा यो वर्ष पिक समयमा ५० मेगावाट माग बढेको छ । गत वर्ष १४ सय ७ मेगावाट थियो भने यसवर्ष १४ सय ५७ मेगावाट नाघिसकेको छ । यो अझै बढ्दै जाने देखिएको छ ।
यसको लागि लोड थेग्न आवश्यक पर्यो भने केही समय फिडर काट्न पनि सकिने शाक्यले भनेका छन् । शाक्यले समस्या देखिएको ठाउँमा तार पग्नलु अगावै मर्मत गर्न निर्देशन दिएको पनि बताए ।
मध्य मस्र्याङ्दीमा समस्या आउँदा देशभर बिजुली काटियो
सोमबार साँझ देशका विभिन्न ठाउँमा विद्युत काटियो, मध्य मस्र्याङ्दी जलविद्युतको एउटा युनिटमा समस्या आउँदा देशभरका विभिन्न ठाउँमा विद्युत अवरुद्ध बन्यो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ढल्केबरदेखि चन्द्रनिगाहपुर १३२ केभीको प्रसारण लाइनमा ओभरलोड हुँदा समस्या आएको बताएको छ ।
भारतबाट बढी विद्युत प्रवाह हुँदा ओभरलोड परेको हो । शाक्यले भने, ‘नेपालको उत्पादन अर्पझट बढ्न गयो र नेपालतर्फको प्रणालीले धान्न सकेन, ढल्केबरबाट खिम्ती हुँदै काठमाडौँ आउने लाइन ओभरलोड भई रोकिन (ट्रिप) पुग्यो,उनले भने, भारतबाट बढी विजुली लियौँ जसले मध्य मस्याङ्दीको एउटा युनिट बन्द भयो । यस्तो सयममा एक दुइवटा लोड काट्छौँ । काट्न नभ्याउँदा बत्ति गएको हो ।
अब समस्या आउन नदिन ट्रान्सफर्मर, कण्डक्टर वा अन्य जे जस्तो उपकरण परिवर्तन गरेर भएपनि प्रणालीलाई दिगो बनाउन प्रसारण निर्देशनालय तथा भार प्रेषण केन्द्रलाई निर्देशन दिएको शाक्यले बताए ।
आन्तरिक उत्पादन कम र भारतबाट आउने विद्युत बढी भएपछि प्राधिकरणलाई सन्तुलन मिलाउँन हम्मे हम्मे परेको छ । दुई महिनाका लागि सय मोगावाट क्षमता थप्न भारतसँग माग गरिने छ । भारतबाट आउने विजुली (ढल्केबर मुजफ्फरपुर) २५० मेगावाट क्षमताको छ भने त्यसलाई ३५० मेगावाट पुर्याइदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतसँग माग गर्ने भएको छ । जाडो महिनाका लागि माग धान्न आगामी शुक्रबार भारतलाई अनुरोध गरिने शाक्यले जानकारी दिए ।
२ महिनाका लागि सय मेगावाट बढाइदिन नेपालले अनुरोध गर्नेछ,यति गरिसकेपछि यो जाडो महिनामा समस्या हुँदैन,’ उनले भने,शुक्रबारसम्म ट्रान्सर्फमरमर्मत् गरिसक्ने र सोही दिन भारतलाइ अनुरोध गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट आयात हुने बिजुलीको भुमिका रहँदै आएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ११ हजार ७३ मेगावाटआवर विद्युत आयातित रहेको छ । उर्जाको माग २५ हजार १ सय ६३ मेगावाटआवर छ र जसमा पिक आवरमा १४ सय ५७ मेगावाट माग छ । प्राधिकरणको ७ हजार ४५ मेगावाटआवर र निजी उत्पादकको ७ हजार ४५ मेगावाटआवर विद्युत रहेको छ ।